WordPress ကိုလွယ်ကူသောအဆင့် (၁၀) ဆင့်ဖြင့်လုံခြုံအောင်လုပ်နည်း | Martech Zone
တနင်္လာနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 10, 2020 အင်္ဂါနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 11, 2020 Akshat Choudhary
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ WordPress ဆိုဒ်များတွင်မိနစ်တစ်မိနစ်စီဟက်ကာ ၉၀၀၀၀ ကျော်ကြိုးစားသည်ကိုသင်သိပါသလား။ ကောင်းပြီ၊ သင် WordPress ပါ ၀ င်သော ၀ ဘ်ဆိုဒ်ရှိပါကထိုအချက်သည်သင့်ကိုစိတ်ပူသင့်သည်။ သင်ကအသေးစားစီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်နေတယ်ဆိုတာအရေးမကြီးပါဘူး။ ၀ ဘ်ဆိုဒ်များ၏အရွယ်အစားနှင့်အရေးပါမှုအပေါ် မူတည်၍ ဟက်ကာများသည်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမပြုပါ။ ၄ င်းတို့သည်အားသာချက်များကိုအသုံးချနိုင်သောအားနည်းချက်များကိုသာရှာဖွေနေသည်။
သင်စဉ်းစားမိနိုင်သည် - ဘာကြောင့်ဟက်ကာများသည် WordPress ဆိုက်များကိုအဘယ်ကြောင့်အဓိကပစ်မှတ်ထားသနည်း။ ထိုသို့သောရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ခြင်းဖြင့်သူတို့ဘာအကျိုးရရှိသလဲ။
အဘယ်ကြောင့်ဟက်ကာများသည် WordPress ဆိုက်များကိုပစ်မှတ်ထားသနည်း။
၎င်းကို WordPress သို့မဟုတ်အခြားပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ထားပါ။ မည်သည့် ၀ ဘ်ဆိုဒ်မှဟက်ကာများမှလုံခြုံမှုမရှိပါ။ အများဆုံးဖြစ်ခြင်း ရေပန်းစားသော CMS ပလက်ဖောင်းWordPress ဆိုဒ်များသည်ဟက်ကာများ၏အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်။ ဒီမှာသူတို့ဘာလုပ်ကြမလဲ
အသစ်ရှာဖွေပါ လုံခြုံရေးအားနည်းချက်များသေးငယ်တဲ့ဆိုဒ်များတွင်အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်သည်။ အားနည်းချက်တစ်ခုသို့မဟုတ်အားနည်းချက်များကိုဟက်ကာများသိရှိသွားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်၎င်းတို့သည်ပိုမိုကြီးမားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုပစ်မှတ်ထားပြီးပိုမိုသောပျက်စီးမှုများကိုဖြစ်စေရန်သူတို့၏ဗဟုသုတကိုသုံးနိုင်သည်။
သင်၏ဝင်လာသောလမ်းကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းပါ မလိုလားသောဝက်ဘ်ဆိုက်များရန်။ ၎င်းသည် high-traffic sites များကိုအဓိကပစ်မှတ်ထားသောအကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်စစ်မှန်သော website သည်၎င်း၏အသုံးပြုသူများကိုအခြားသံသယဖြစ်ဖွယ် website တစ်ခုသို့ဆုံးရှုံးသွားနိုင်သည်။
ငွေရှာပါ ဝင်ငွေရရှိ မှောင်ခိုထုတ်ကုန်များကိုစစ်မှန်သောဆိုက်များတွင်သို့မဟုတ် ransomware သို့မဟုတ် crypto သတ္တုတူးဖော်ရေးကဲ့သို့ malware မျိုးကွဲများမှတဆင့်ရောင်းချခြင်းမှဖြစ်သည်။
ဉာဏသို့မဟုတ်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရယူပါ လျှို့ဝှက်ဒေတာ ထိုကဲ့သို့သောဖောက်သည်အချက်အလက်, ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးဒေတာ, ဒါမှမဟုတ်ကုမ္ပဏီ၏ဘဏ္asာရေးမှတ်တမ်းများအဖြစ်။ ဒီခိုးယူထားသောအချက်အလက်များကိုဟက်ကာများသည်ပိုက်ဆံအတွက်ရောင်းချခြင်း (သို့) မျှတမှုမရှိသောယှဉ်ပြိုင်မှုအားသာချက်တစ်ခုအတွက်သုံးနိုင်သည်။
ယခုဟက်ကာများသည်အောင်မြင်သော hack သို့မဟုတ်အလျှော့ပေးလိုက်လျောမှုမှမည်သို့အကျိုးရရှိနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိလာပြီ ဖြစ်၍ ကြိုးစား။ စမ်းသပ်ပြီးသောနည်းလမ်းဆယ်ခုကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးကြပါစို့။ WordPress ဆိုဒ်ကိုလုံခြုံအောင်ထားခြင်း.
ကံကောင်းတာက WordPress အတွက်၊ website လုံခြုံရေးကိုမြှင့်တင်ရန်သင်အသုံးပြုနိုင်သောနည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ ဤနည်းလမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းဆုံးအပိုင်းမှာ၎င်းတို့အများစုသည်ရှုပ်ထွေးမှုမရှိသောကြောင့်မည်သည့်အတွေ့အကြုံရှိ WordPress အသုံးပြုသူမှမဆိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည်။ ဒီတော့စဖွင့်ကြစို့
အဆင့် ၁ - သင်၏ Core WordPress နှင့် Plugins နှင့် Themes အသစ်ပြောင်းပါ
WordPress ဆိုဒ်များကိုဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ရသည့်အကြောင်းရင်းများထဲတွင်ခေတ်မမှီသော WordPress ဗားရှင်းများ၊ plugins များနှင့်အခင်းအကျင်းများနှင့်အတူပါဝင်သည်။ ယခင် WordPress နှင့်လုံခြုံရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် bug များကိုဟက်ကာများကအမြတ်ထုတ်ပြီးမကြာခဏ WordPress ဆိုဒ်များတွင်လည်ပတ်နေဆဲ plugin / theme ဗားရှင်းများ။
ဒီခြိမ်းခြောက်မှုကိုအကောင်းဆုံးကာကွယ်နိုင်ဖို့ကတော့သင်၏အဓိက WordPress ဗားရှင်းကိုထည့်သွင်းတပ်ဆင်ထားသည့်ပလပ်ဂင်များ / themes များနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းများသို့ပုံမှန်မွမ်းမံခြင်းဖြစ်တယ်။ ၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်သင်၏ WordPress admin အကောင့်ရှိ“ Auto Update” လုပ်ဆောင်ချက်ကိုဖွင့်ပါသို့မဟုတ်သင်၏လက်ရှိထည့်သွင်းထားသော plugins / themes များအားလုံးကိုစာရင်းစစ်ဆေးပါ။
အဆင့် ၂ - Firewall Protection ကိုအသုံးပြုပါ
WordPress ဆိုဒ်များကို ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်ဟက်ကာများသည်အလိုအလျောက် bot သို့မဟုတ် IP တောင်းဆိုမှုများကိုမကြာခဏပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်ဤနည်းဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့လျှင်မည်သည့် site ကိုမဆို hackers များကအများဆုံးပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက် firewalls များသည်သံသယဖြစ်ဖွယ်အိုင်ပီလိပ်စာများမှ IP တောင်းဆိုမှုများကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်ဝက်ဘ်ဆာဗာသို့မရောက်ရှိမီထိုတောင်းဆိုမှုများကိုပိတ်ပင်ရန်တည်ဆောက်သည်။
Firewall သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးအယူအဆ။ အဖြူအပေါ်အထီးကျန်နည်းပညာအယူအဆ
သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်အတွက် firewall protection ကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
in-built firewalls များ - သင်၏ဝဘ်ဆိုက် hosting ကုမ္ပဏီမှ
Cloud-based firewall များ - ပြင်ပမိုcloud်းတိမ်ပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်တည်ခင်း.ည်
Plugin-based firewalls များ - ၎င်းကိုသင်၏ WordPress ဆိုက်တွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်
အဆင့် ၃။ မည်သည့် malware ကိုမဆိုစကင်ဖတ်ပြီးဖယ်ရှားပါ
ဆိုဒ်ကိုအလျှော့ပေးလိုက်လျောရန်ဟက်ကာများသည်ဆန်းသစ်သော malware အမျိုးအစားများကိုဆက်လက်တီထွင်နေကြသည်။ အချို့ malware များသည်ချက်ချင်းပင်ကြီးမားသောပျက်စီးမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပြီးသင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုလုံးလုံးလျားလျားပျက်စီးစေနိုင်သော်လည်းအခြားသူများမှာမူပိုမိုရှုပ်ထွေးပြီးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အထိပင်ရှာဖွေရန်ခက်ခဲသည်။
malware မှအကောင်းဆုံးကာကွယ်မှုသည်မည်သည့်ကူးစက်မှုမဆိုသင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုမှန်မှန်စစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ ထိပ်တန်း WordPress လုံခြုံရေး plugins ကို MalCare နှင့် WordFence တို့ကဲ့သို့ malware များကိုစောစီးစွာရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းခြင်းတို့အတွက်ကောင်းမွန်သည်။ ဤလုံခြုံရေး plugins များသည်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်သောအသုံးပြုသူများအတွက်ပင်ထည့်သွင်းရန်နှင့်လုပ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူသည်။
အဆင့် ၄ - လုံခြုံစိတ်ချရသော ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုသုံးပါ
ခေတ်မမှီတော့သော WordPress ဗားရှင်းများနှင့် plugins / themes များအပြင်၊ web hosting setup သည်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်လုံခြုံရေးအတွက်သိသာထင်ရှားသည့်ဖော်ပြချက်တစ်ခုရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဟက်ကာများသည်များစွာသောဝက်ဘ်ဆိုက်များအကြားတွင်တူညီသောဆာဗာကိုမျှဝေသည့်မျှဝေထားသော hosting platform ပေါ်တွင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုပစ်မှတ်ထားတတ်သည်။ မျှဝေခြင်းသည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော်လည်းဟက်ကာများသည်မူပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုအားအလွယ်တကူကူးစက်နိုင်ပြီးအခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့ကူးစက်ပျံ့နှံ့နိုင်သည်။
ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိစေရန် ဘက်ပေါင်းစုံလုံခြုံရေးအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူ web hosting အစီအစဉ်ကိုရွေးချယ်ပါ။ shared hosts များကိုရှောင်ကြဉ်ပါ၊ အစား VPS အခြေပြုသို့မဟုတ်စီမံခန့်ခွဲထားသော WordPress hosting ကိုသွားပါ။
အဆင့် ၅ - သင်၏ WordPress ဆိုက်ကိုအပြည့်အဝအရံသိမ်းပါ
သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၌တစ်ခုခုရှိပါကဝက်ဘ်ဆိုက်မိတ္တူကူးခြင်းသည်အသက်ကယ်နိုင်သည်။ WordPress အရန်များသည်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ဒေတာဘေ့စ်ဖိုင်များအားလုံခြုံသောနေရာတွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။ အောင်မြင်သော hack ဖြစ်လျှင် backup ဖိုင်များကိုသင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့လွယ်ကူစွာပြန်ယူပြီး၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုပုံမှန်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
WordPress backup များကိုနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်၊ သို့သော်နည်းပညာမဟုတ်သောအသုံးပြုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းမှာ backup plugins များကဲ့သို့ဖြစ်သည် BlogVault သို့မဟုတ် BackupBuddy ။ တပ်ဆင်ရန်နှင့်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသောဤအရံပလပ်အင်များသည်သင်၏နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နိုင်ရန်အတွက်အရန်ကူးခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ဆောင်မှုများကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အဆင့် ၆။ သင်၏ WordPress Login Page ကိုကာကွယ်ပါ
သင်၏ဟက်ကာများမှပစ်မှတ်ထားသောအသုံးအများဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာများအနက်သင်၏ WordPress ၏ login စာမျက်နှာသည်သင်၏လျှို့ဝှက်အကောင့်များကိုလွယ်ကူစွာရယူနိုင်သည်။ brute force attack ကို အသုံးပြု၍ hackers များသည် login page မှတဆင့်သင်၏ WordPress“ admin” အကောင့်ကိုဝင်ရောက်ရန်အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားသောအလိုအလျောက် bot များကိုအသုံးပြုသည်။
သင်၏ login စာမျက်နှာအားကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ပုံမှန်အားဖြင့် www.mysite.com/wp-admin ဖြစ်သောသင်၏ပုံမှန် login စာမျက်နှာ URL ကိုဝှက်နိုင်သည်။
လူကြိုက်များတဲ့“ Theme My Login” လို WordPress Login စာမျက်နှာပလပ်အင်များသည်သင့်ရဲ့ login စာမျက်နှာကိုအလွယ်တကူဖုံးကွယ်ရန် (သို့မဟုတ်) ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။
အဆင့် ၇ - အသုံးမပြုတဲ့ (သို့) မလှုပ်မရှားဖြစ်နေသော Plugins နှင့် Themes များကိုဖယ်ထုတ်ပါ
အစောပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း plugins / themes များသည်သင်၏ WordPress site ဖြင့်ဖျက်ဆီးခြင်းကိုဟက်ကာများအလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သည်။ အသုံးမပြုရသေးသော (သို့) မလှုပ်မရှားဖြစ်နေသောပလပ်အင်များနှင့်အခင်းအကျင်းများအတွက်၎င်းသည်တူညီသည်။ အကယ်၍ သင်သည်များစွာသောသူတို့ကိုသင့်ဆိုဒ်တွင်တပ်ဆင်ပြီးပါက၎င်းတို့ကိုအသုံးမပြုတော့ပါက၎င်းတို့ကိုဖယ်ရှားရန်သို့မဟုတ်၎င်းတို့ကိုပိုမိုအလုပ်လုပ်သော plugins / themes များဖြင့်အစားထိုးရန်အကြံပြုလိုသည်။
ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်လုပ်မှာလဲ သင်၏ WordPress အကောင့်သို့ဝင်ရန် admin ရဲ့ အသုံးပြုသူနှင့်လက်ရှိတပ်ဆင်ထားသောပလပ်အင်များ / အကြောင်းအရာများစာရင်းကိုကြည့်ပါ။ အသုံးမပြုတော့သောပလပ်အင်များ / အခင်းအကျင်းအားလုံးကိုဖျက်ပါ။
အဆင့် ၈။ ကြံ့ခိုင်သောစကားဝှက်များကိုသုံးပါ
ဒီသိသာဖြစ်သင့်သည်မဟုတ်လော ဒါပေမဲ့၊ ငါတို့မှာအားနည်းနေတဲ့စကားဝှက်တွေရှိနေသေးတယ် စကားဝှက်ကို နှင့် 123456 အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။ အောင်မြင်သော brute force attack တစ်ခုကိုလုပ်ဆောင်ရန် hackers များသည်အားနည်းသော password များကိုအသုံးချသည်။
သင်၏ WordPress အသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက်လမ်းညွှန်ချက်အချို့ကိုပြenfor္ဌာန်းပါ။ စာလုံးအကြီး ၈ လုံးပါသည့်စကားဝှက်များကိုစာလုံးအကြီးနှင့်အသေးများ၊ အက္ခရာနံပါတ်များနှင့်အထူးအက္ခရာများဖြင့်အသုံးပြုပါ။ နောက်ထပ်လုံခြုံရေးအစီအမံတစ်ခုမှာသင်၏ WordPress စကားဝှက်များကိုအနည်းဆုံးသုံးလတစ်ကြိမ်ပြောင်းလဲရန်ဖြစ်သည်။
အဆင့် ၉။ သင်၏ဝဘ်ဆိုက်အတွက် SSL လက်မှတ်ရယူပါ
Secure Socket Layer အတွက်တိုတောင်းသော၊ SSL အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်သည် WordPress ဆိုဒ်များအပါအ ၀ င် ၀ ဘ်ဆိုဒ်အားလုံးအတွက်လုံး ၀ မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ ၎င်းကိုအဘယ်ကြောင့်ပိုမိုလုံခြုံမှုရှိသနည်း။ SSL အသိအမှတ်ပြုဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်တိုင်းသည်ဝက်ဘ်ဆာဗာနှင့်အသုံးပြုသူဘရောက်ဇာအကြားသတင်းအချက်အလက်များကို encrypt လုပ်သည်။ ၎င်းသည်လျှို့ဝှက်အချက်အလက်များကိုဟက်ကာများကြားဖြတ်နှိမ်နင်းရန်ပိုမိုခက်ခဲစေသည်။ ဒီဟာကဘာလဲ ဤ ၀ ဘ်ဆိုဒ်များကိုဂူဂဲလ်မှနှစ်သက်သည် ပိုမိုမြင့်မားသော Google အဆင့်သတ်မှတ်ချက်.
သင်၏ဆိုဒ်ကိုလက်ခံထားသောသင်၏ဝဘ်ဆိုက်ပံ့ပိုးသူထံမှ SSL လက်မှတ်ကိုသင်ရနိုင်သည်။ အခြားတစ်ခုအနေဖြင့်သင်သည် SSL အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အတွက်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် Let's Encrypt ကဲ့သို့သောကိရိယာများကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။
အဆင့် ၁၀။ WordPress ဝဘ်ဆိုက်ခိုင်မာစေပါ
နောက်ဆုံးအစီအမံမှာ WordPress မှသတ်မှတ်ထားသောဝဘ်ဆိုက်တင်းကျပ်သောအစီအမံများဖြန့်ကျက်ရန်ဖြစ်သည်။ WordPress ဝဘ်ဆိုက်ခိုင်မာ ပါဝင်သောအဆင့်များစွာပါဝင်သည်။
သင်၏အရေးကြီးသော WordPress ဖိုင်များတွင်အန္တရာယ်ရှိသောကုဒ်များ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်ဖိုင်တည်းဖြတ်ခြင်းအင်္ဂါရပ်ကိုပိတ်ထားပါ
မည်သည့်အန္တရာယ်ရှိသောကုဒ်ပါရှိသည့် PHP ဖိုင်များကိုဟက်ကာများမှတားဆီးနိုင်သည့် PHP ဖိုင်လုပ်ဆောင်မှုကိုပိတ်ခြင်း
သင်၏ WordPress ဗားရှင်းကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်အားနည်းချက်များကိုရှာဖွေခြင်းမှဟက်ကာများကိုတားဆီးသော WordPress ဗားရှင်းကိုဖျောက်ထားပါ
သင့် WordPress ဆိုဒ်ကိုဖျက်ဆီးရန်ဟက်ကာများအသုံးပြုလေ့ရှိသော wp-config.php နှင့် .htaccess ဖိုင်များကိုဖျောက်ထားခြင်း
ကြီးမားသည်ဖြစ်စေ၊ သေးငယ်သည်ဖြစ်စေ WordPress ဆိုဒ်သည်ဟက်ကာများနှင့် malware များမှလုံးဝလုံခြုံမှုမရှိပါ။ သို့သော်၊ ဤဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသောအတိုင်းအတာဆယ်ခုအနက်တစ်ခုစီကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်သင်၏လုံခြုံရေးရမှတ်ကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤအဆင့်များသည်လုပ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူပြီးအဆင့်မြင့်နည်းပညာဆိုင်ရာဗဟုသုတမလိုအပ်ပါ။
အလွယ်တကူဖြစ်စေရန်လုံခြုံရေး plugins အများစုသည် ၄ ​​င်းတို့၏ထုတ်ကုန်တွင် firewall protection, စီစဉ်ထားသည့်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်း၊ malware ဖယ်ရှားခြင်းနှင့် website hardening များကဲ့သို့သောဤအင်္ဂါရပ်များစွာကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်လုံခြုံရေးကိုသင့်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်စေရန်အထူးအကြံပြုလိုပါတယ် ဝဘ်ဆိုက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစစ်ဆေးရမည့်စာရင်း.
ဤစာရင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ဘာထင်သလဲကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေးပါ။ ကျနော်တို့အကြွင်းမဲ့အာဏာမဖြစ်မနေဖြစ်သည့်အရေးကြီးသောဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစီအမံအပေါ်လွဲချော်ပြီလော သင့်မှတ်ချက်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။
Tags: backup လုပ်ထားblogvaultfirewall ကာကွယ်မှုwordpress ကို hackwordpress ကိုခိုင်မာအောင်လုပ်နည်းwordpress ကိုဘယ်လိုလုံခြုံအောင်ထားရမယ်.htaccesshttpsmalcareကို malwareလုံခွုံရေးလုံခြုံရေးအားနည်းချက်များSSLကို web host ကို
Akshat Choudhary သည်မိမိကိုယ်ကိုအရာများသင်ကြားရန်မိမိစွမ်းရည်အပေါ်အမြဲတမ်းဂုဏ်ယူခဲ့သည်။ စတင်ကတည်းက BlogVaultAkshat သည်သူ၏ဘေးချင်းစီမံကိန်းကိုအမြတ်အစွန်းကြီးမားသည့်အကျိုးစီးပွားအဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့ပြီးအိန္ဒိယ၏ startup နေရာတွင်အသစ်များတိုးချဲ့နေသည်။ WordPress အသိုင်းအဝိုင်းတွင်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနီးပါးအနေဖြင့် Akshat သည်သုံးစွဲသူများရုန်းကန်နေရသည့်နေရာများကိုနားလည်ရန်စိတ်အားထက်သန်နေသည်။ မည်သည့်ထုတ်ကုန်မဆိုတည်ဆောက်ခြင်း၏နောက်ကွယ်တွင် Akshat ၏အဓိကယုံကြည်ချက်မှာသုံးစွဲသူများအနေဖြင့်အကူအညီမလိုအပ်သည်ကိုသေချာစေပြီး၎င်းကိုသူတို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါကကူညီရန်ဖြစ်သည်။